बक्स अफिसमा तहल्का पिट्दै कमल हसनको ‘विक्रम’ ! - Laltin Media
Home»ग्ल्यामर»बक्स अफिसमा तहल्का पिट्दै कमल हसनको ‘विक्रम’ !
बक्स अफिसमा तहल्का पिट्दै कमल हसनको ‘विक्रम’ !
By लाल्टिन डट कम June 15, 2022 No Comments1 Min Read
साउथ सुपरस्टार कमल हसनको फिल्म ‘विक्रम’ ले बक्स अफिसमा धमाका मच्चाएको छ । फिल्मले ११ दिनमा विश्वभर ३२२ करोडभन्दा बढीको कमाई गरेको छ । यति मात्र होइन, फिल्मले भारतबाट मात्रै २२० करोडभन्दा बढीको व्यापार गरेको छ । योसँगै यो कमल हसनको करियरको उत्कृष्ट फिल्म पनि बनेको छ ।
‘विक्रम’को सफलतापछि अब हालैको एक अन्तर्वार्तामा कमल हसनले यो फिल्मबाट जति पैसा कमाउन लागिरहेको छ, त्यसले अब आफ्नो सबै ऋण तिर्न सक्ने बताएका छन् । उनले पनि भने, “अब म मेरो सबै ऋण तिर्न सक्छु। म आफ्नो मनपर्ने सामग्रीमा मात्र काम गर्नेछु। म मेरो परिवार र साथीहरूलाई जे चाहन्छु, त्यो दिन सक्छु।” उनले यो पनि खुलासा गरे कि पहिले जब उनी आफ्नो फिल्मले ३ सय करोड कमाउनेछ भन्दा, कसैले पत्याएका थिएनन्।
रिपोर्टका अनुसार १५० करोडको बजेटमा बनेको फिल्मले ११ दिनमा भारतका सबै भाषामा २२०.७५ करोड कमाएको छ । योसँगै फिल्मले हालसम्म विश्वभर ३२२.१५ करोडको ग्रस बक्स अफिस कलेक्सन गरेको छ । यो फिल्म विश्वभर ३२०० स्क्रिनमा रिलिज भएको थियो ।
यो एक्सन ड्रामा फिल्मलाई लोकेश कनागराजले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा कमल हासनका अलावा विजय सेतुपति, फहद फाजिल, कालिदास जयराम, नारायण, एन्टोनी वर्गीस र अर्जुन दासको पनि मुख्य भूमिका छ।